दुर्गा विरहीले मायालुलाइ बागलुङको गाउँ घुम्न बोलाए, गाउँलेले के भने होला ?? भिडियो हेर्नुहोस् । | jillakhabar.com Nepal's No1 News site
Home अचम्मका खबर दुर्गा विरहीले मायालुलाइ बागलुङको गाउँ घुम्न बोलाए, गाउँलेले के भने होला ?? भिडियो हेर्नुहोस् ।
दुर्गा विरहीले मायालुलाइ बागलुङको गाउँ घुम्न बोलाए, गाउँलेले के भने होला ?? भिडियो हेर्नुहोस् ।
on: ३ श्रावण २०७५, बिहीबार ०९:२६
बागलुङ जिल्लामा जन्मेर गित संगितलाइ सहारा बनाउदै आउनुभएका दुर्गा विरही परिचित नाम हो । जिल्लाको कला संस्कृती, पर्यटकीय स्थल हरेक क्षेत्रलाइ विरहीले गितमार्फत उतार्नमा ब्यस्त हुनुहुन्छ । जिल्लाखबर डटकम संगको कुराकानीमा उहाँ आफुलाइ जिल्लावासी भनेर चिनाउन चाहने बताउनुहुन्छ । आफ्नै रचनामा हजारौं गीतहरु तयारी पार्दै आउनुभएका निर्देशक समेत रहनुभएका बिरहीको “आउनु सानु घुम्नलाई गाँउ मेरो” बोलको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ ।
दुर्गा बिरहीको शब्द तथा लय रहेको सो गीतमा दुर्गा बिरही र जुना श्रीसको स्वर रहेको छ । आत्म बिस्वास फिल्मस् प्रालीले निर्माण गरेको सो भिडियोलाई मौसम हिमालीले निर्देगर्नुभएको छ । बाशु बरालले छायांकन गर्नुभएको भिडियोमा प्रकाश सपूत, रीना थापा मगर ,नुना आर्यन,नवीन पुन र हास्यकलाकार सन्तोष मगरातीले अभिनय गर्नुभएको छ । छोटो समयमै चर्चा कमाउन सफल विरहिका यसअघि पनि चर्चीत गितहरु बजारमा आइसकेका छन् ।
बर्षाले ल्याएको विनाश: नुवाकोटको चोकतेमा पहिरोले घरै पुरियो ।
फेरी अर्को आगलागी घटना : रेस्टुराामा आगलागी हुँदा ६० लाखको क्षति